Muki Garang: Muusiga iyo gabayada ayaa Afrika baddali kara - Sabahionline.com
Muki Garang: Muusiga iyo gabayada ayaa Afrika baddali kara
Muki Garang waa gabayaa Kenyaan ah oo xirfado badan leh, waa muusiikayste tuma hip-hop, iyo waliba qoraa u dooda caddaaladda bulshada iyo awood siinta dhallinyarada isaga oo isticmaalaya suugaantiisa.
Muki Garang ayaa raba in uu Afrika u muujiyo inuu yahay dhul khayraad badan leh si uu uga hortago aragtida ah in uu yahay dhul fakhriyeed. [Kayd]
Fanaanka Keenyaanka ah ee Kennet B oo amaanay ereyga lagu hadlo ee caddaaladda bulshada
Fannaan Soomaaliyeed oo heesaha raabka u isticmaala dagaalka al-Shabaab
Farshaxanlaha Kenyaanka ah ee Pascal Chuma: Farshaxanku waa 'muusiko ka timid ruuxdayda'
Isaga oo aad u xiiseeya muusiga loo yaqaano rap, gabayga iyo qaybaha kale ee fanka, ayuu Garang ka heesayay sanado badan magaalooyinka Kenya iyo dhowr waddan oo Afrikaan ah. Sannadkii 2012, ayaa isaga oo la kaashanaya muusiikaystayaal kale oo Afrikaan ah ay duubeen cajal ka kooban 18 heesood oo cinwaankiisu ahaa "Hal Doolar Maalintii".
Garang ayaa kala hadlay Sabahi muusikadiisa, safaradiisa iyo doonistiisa ah in uu kor u qaado xaaladda dhallinyarada Afrika.
Sabahi: Sidee ayaad adigu isku tilmaami kartaa?
Garang: Waxaan ahay fannaan Kenyaan ah iyo qoraa oo dhinac walba oo noloshayda ah raadiya runta, ha ahaato markii aan wax baranayo, falsafadda ka doodayo, ay tahay wax ku saabsan fannaaniinta waddankayga iyo kuwa aniga i jecel, iyo ta u muhiimsan oo ah, gabayada.
Waxaa kale oo aan ahay nin fanka horumariya waxaanan ku guulaystay in aan Kenya keeno muusiikaystaha Kongo ee aadka loo yaqaano ee Fally Ipupa. Waxaan kale oon safka hore kaga jiray abuuritaanka nidaamyo sida Words and Pictures (WAPI), halkaas oo dadku ay sheekooyinkooda ku sheegayaan iyagoo adeegsanaya [fanka].
Sabahi: Maxaad u dooratay muusiga rab-ka si aad wax ugu gudbiso?
Garang: Waxaan isku dayay in aan heeso, waxaanse ogaaday in codkaygu uusan u samaysnayn mihnaddaas weyn. Si kastaba ha ahaatee, waxaan dareemay doonitaan ah in dadku ay maqlaan fariimahayga aanan la wadaago aragtidayda noloshan aan ku nool nahay.
Waxaan ku bilaabay rab, kadibna waxaan ku daray gabay la qaadayo oo masraxa la soo istaagayo ka dib markii aan ogaaday in dad baadan oo Kenyaati ah ay ka qabaan dareen aan wanaagsanayn muusigan Ameerikaanka ah ee sida dhakhsaha ah ku socda. "Kwani? Open Mic", ayaa waxaan ku leeyahay isutag caan ah oo ay u soo daawasho tagaan gabayaaga Nairobi Talaadada ugu horaysa bil kasta. Waxaa kale oon ka tumay xafladaha British Council ka hor intii aanan ugu dambayntii samaysanin masaraxayga gabayga ee ii gaarka ah ee la yiraahdo "Maisha Yetu".
Sabahi: Sidee ayaa ku sifayn kartaa saamaynta muusikadaada ee dhinaca shacabka, gaar ahaan magaalada Nairobi?
Garang: Muusikada Hip-hop wuxuu ahaaa waligiisna ahaan doonaa mid la jaan qaada dhallinyarada, gaar ahaan kuwa saboolka ah, kaas oo ka hadlaya dhibaatooyinka mujtamaca. Iyada oo dadka ku nool Nairobi saddex meeloodkiiba laba ay yihiin dhallinyaro aan shaqaynin, ayaa hip-hop-ku siinayaa meel ay isugu yimaadaan, ku wada hadlaan iskuna arkaan, waxaas oo dhan oo noqonaya tallaabo horay loogu qaadayo abuuridda mujtamac fiican.
Sabahi: Adiga oo ah fannaan tagay waddamo badan oo Afrikaan ah, maxay tahay kaalinta aad u malaynayso in hip-hop-ku iyo muusiguba ay ka qaadan karaan xaqiijinta himilooyinka Afrikaanka?
Garang: Cajaladaydii ugu dambaysay ee "A Dollar a Day", oo lagu soo saaray Koonfurta Afrika, ayaa ka hadlaysa arrimahaas oon ahayn Kenya oo kaliya balse Afrika oo dhan. Isla qaabkaas waxaa isticmaalay muusikaystayaal kale oo Afrikaan ah oo caan ahaa sida Miriam Makeba, Lucky Dube iyo Pepe Kalle, taas oo ka dhigan in muusigu uu kaalin muhiim ah ka qaadan karo dareenka dadka ee [dhinaca] arrimaha saamaynaya qaaradda.
Iyada oo loo sameeyay in ay qayb ka ahaato ururka talada haya ee Ururka Qaranka ee Koonfurta Afrika dabaaldagooda boqolaadka ah, oo ay ka qayb galeen fannaaniin ka kala yimid Zimbabwe, Koonfur Afrika iyo Botswana, ayaa " A Dollar a Day" loogu tala galay in uu dhiiri galiyo dhaqanka xuduudaha isaga gudba, muusikada iyo is dhexgalka bulshada. Heesahaas ayaa ka hadlaya arrimaha sida jacaylka HIV/AIDS, dad nacaybka, siyaasadaha dib u habaynta dhulka ee Zimbabwe iyo arrimaha qabiilada iyo jinsiga ee Kenya.
Odhaahda "hal doolar maalintii" waxay maskaxda ku soo celinaysaa sida warabaahinta reer Galbeedka ay u suureeyaan waddamada Afrikaanka ah ee Saharada ka Hooseeya inay yihiin meelo [sabool ah]. Laakiin, haddii aan nahay fannaaniinta Afrikaanka ah, aragtidaas ayaan ku baddalaynaa muusig waxaanan Afrika u muujinaynaa meel khayraadku uu ka buuxo.
Markii laga reebo Koonfur Afrika, waxaan tagay Ethiopia, Botswana, Tanzania iyo Zambia.
Sabahi: Ma jiraan xaflado dhowaan aad qaban doonto?
Garang: Haa, waxaan samayn doonaa qaban qaabadii ugu dambaysay oo si toos ah aan Nairobi, Mombasa iyo Kisumu uga qaadi doono bisha soo socota "A Dollar a Day" ka hor inta anaan ku noqonin Koonfur Afrika dhammaadka sanadka si aan u duubo cajalka kiisii labaad. Fannaanka maxalliga ah ee Mwafrika iyo aniga ayaa sidoo kale ka shaqaynayna barnaamij telefishin oo tafaasiishiisa dhowaan la sii dayn doono.